Raw Osimertinib (AZD-9291) powder (1421373-65-0) hplc = 98% | AASraw
Osimertinib (AZD-9291) powder
/ Products / MaR & D Reagents / Osimertinib (AZD-9291) upfu
Rating: SKU: 1421373-65-0. Category: MaR & D Reagents
MUTSVENE unobatsira uye unokwanisa kugadzira kubva ku gram kusvika mukuraira kweOsimertinib (AZD-9291) powder (1421373-65-0), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Osimertinib (AZD-9291) powder inoritor, inoritor irreversible ye epidermal kukura factor receptor (EGFR) senitizing uye T790M kupikisa mutations (IC50s = 15-17 nM) pavanorega fomu yemhando yemusana (IC50 = 480 nM) .1 Iyo inosunga iIGF1R yakabatana Uye hazvipi zvinogamuchirwa zvinopera zvishoma nezvishoma (IC50s = 2.9 uye 16.2 μM, zvichienderana) .1 AZD 9291 yakaratidzwa kuti inodzivisa kuora kwekukura mumutambo we xenograft mouse pamiromo ye 5-10 mg / kg uye yakaedzwa kuchipatara kune varwere yakakura EGFR mutant non-small-cell lung cancer.
Osimertinib (AZD-9291) vhidhiyo yeupfu
Osimertinib (AZD-9291) powder Basic Characters
Name: Osimertinib (AZD-9291) powder
Molecular Formula: C28H33N7O2
Molecular Kurema: 499.61
Melt Point: > 188ºC
Storage Temp: -20 ° C
Color: Chiedza chine tsvina yakasimba
Osimertinib (AZD-9291) powdhi mukushandiswa
AZD-9291 powder (CAS 1421373-65-0), N-[2-[[2-(dimethylamino)ethyl]methylamino]-4-methoxy-5-[[4-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-2-propenamide
AZD-9291 Kushandiswa kwepoda
AZD-9291 powder inoshandiswa kamwe chete zuva nezuva pamuromo pa 5 mg / kg yakakonzera kuderedzwa kwakanyanya kwemakumbo pasi peEGFRm + (PC9; 178% kukura kwekudzivirira) uye EGFRm + / T790M (H1975; 119% kukura kwekudzivirira) maronda emhando mu vivo,
mushure memazuva 14 dosing. Uyezve 5 mg / kg AZD-9291 powder yakanga yakakwana kuita kuti shrinkage yakakura yeEGFRm + uye EGFRm + / T790M transgenic mouse lung tumor. Chirwere chekudzivirira kukanganisa chaibatanidza nekudzivirirwa kwakanyanya kweEGFR phosphorylation uye nzira dzekudzika dzinoyerera dzakadai seA AKT neE ERK. Kurwara kwenguva refu kwenguva refu yePX9 uye H1975 xenograft tumorumine neAIDS-9291 powder inotungamirira kumhinduro yakakwana uye yakasimudzira macroscopic, isina maitiro anooneka mushure memazuva 40 dosing, uye kuchengetwa kupfuura mazuva 100. Uyezve, pre-clinic data inoratidzawo kuti AZD-9291 powder inogona kutora matumbu akawana kushorwa kwezvino ichangobva kuwanikwa inonzi HER2-amplification mechanism, zvichidaro inogona kuwedzera ruzivo rwayo mune varwere veTKI vasingagoni.
Warning on AZD-9291 powder
AZD-9291 powder (CAS 1421373-65-0) ndiyo chete mishonga inogamuchirwa inoratidzwa kune varwere vane metastatic EGFR T790M mutation-positive isiri-diki kenza yemapapu kenza. Ichi chiratidzo chinogamuchirwa pasi peiyo FDA's yakakurumidza kubvumidza maitiro zvichienderana nehuremu hwekupindura mwero uye nguva yekupindura (DoR).
Zvinowanzosvibisa zvinosanganisira marwere, stomatitis, rashes, yakaoma kana yakasviba ganda, zvirwere apo munwe kana zvigunwe zvinoshandura ganda, pasi peplatelet zvinyorwa, zvinyorwa zvishoma zveukotikiti, uye nhamba dzepasi neutrophil.
Izvo hazvina kupesana kweTAGRISSO
Zvirwere Zvirwere Zvirwere (ILD) / Pneumonitis zvakaitika mu3.3% uye zvakaparara mu0.5% yevarwere ve813 TAGRISSO. Rega TAGRISSO uye nokukurumidza tsvagai kune ILD mune chero murwere anouya achiwedzera kuwedzera kwezvirwere zvinopfurikidza zvinoratidza ILD (semuenzaniso, dyspnea, chifuva uye fever). Unoramba zvachose TAGRISSO kana ILD ichiratidza
Kushandiswa kwemazuva eQTc kwakaitika muTAGRISSO varwere. Pakati pevarwere ve411 mune zvidzidzo zviviri zvePekutanga II, mumwe murwere (0.2%) akawanika kuva neQTc mukuru kupfuura 500 msec, uye varwere ve11 (2.7%) vakawedzera kubva kukutanga QTc kupfuura 60 msec. Kufambisa nguva nenguva kuongorora neEECG uye electrolytes kune varwere vane chirwere cheHQC chema congenital, congestive moyo kusakundikana, electrolyte kusagadzikana, kana avo vari kutora mishonga inozivikanwa kuti iwedzere nguva yeQTc. Kuramba zvachose TAGRISSO kune varwere vanokura nekuwedzera kwenguva yeQTc nezviratidzo / zviratidzo zvehupenyu zvinopisa urongwa
Cardiomyopathy yakaitika mu1.4% uye yakauraya mu0.2% ye813 TAGRISSO varwere. Kuruboshwe Ventricular Ejection Fraction (LVEF) kuderera> 10% uye kudonha ku <50% kwakaitika mu2.4% ye (9/375) TAGRISSO varwere. Ongorora LVEF usati watanga uyezve pamwedzi mitatu nguva dzekurapwa. Bvisa TAGRISSO kana ejection chidimbu ichiderera ne3% kubva pamafambisirwo ekutanga uye iri pasi pe10%. Nezve chiratidzo chechiratidzo congestive moyo kutadza kana kuenderera asymptomatic LV kusagadzikana kusinga gadzirise mukati memasvondo mana, kurega zvachose TAGRISSO.
Inokurudzira vakadzi vane pamuviri vangave nengozi kumwana. Itai kuti vakadzi vasvike pakubereka vana kuti vashandise kubata pamuviri mukati meTAGRISSO mishonga uye kwemavhiki e6 mushure mekupedzisira. Inokurudzira varume nemadzimaikadzi ekukwanisa kubereka kuti vashandise kuberekwa kwakanaka kwemwedzi 4 mushure mekupedzisira.
Mhedzisiro inowanzoitika (> 20%) yakaonekwa mu TAGRISSO varwere vaive manyoka (42%), mapundu (41%), ganda rakaoma (31%) uye chipikiri chepfu (25%).
AZD-9291 powder yakanga yakashanda zvikuru kune varwere vane mutsa wemapapu neEGFR T790M mutation uyo akanga aine kuwedzera kwehutano panguva yakatanga kurapa neEGFR tyrosine kinase inhibitors.
AZD-9291 powder iri kuidzidzwa mumushumo unogadziriswa, AURA3, iyo yakazaruka mazita, randomized Phase III yekuongorora yakagadzirirwa kuongorora kushanda nekuchengeteka kweA AZD-9291 powder pamwe ne platinum-based doublet chemotherapy kune varwere vane EGFR T790M positive, kana metastatic NSCLC avo vakafambira mberi mushure mekurapwa kwekare neEGFR-TKI. AZD-9291 powder iri kuongororwawo mune adjuvant setting uye mumatsetse emitambo yekutanga, kusanganisira nevarwere vane maitiro europi, uyewo pamwe chete nemamwe makemikari.
AZD-9291 powder 80mg kamwe-zuva rimwe nerimwe bheeteri ndiro mushonga wekutanga wakarongerwa kurapwa kwevarwere vane mastatic epidermal growth factor receptor (EGFR) T790M mutation-positive kwete-duku-kemukirini yemapapu yemapapu (NSCLC), yakaonekwa neDAA-yakagamuchirwa muedzo, uyo akafambira mberi kana kuti mushure meEGFR tyrosine kinase inhibitor (TKI) therapy. Zvisiri-kliniki in vitro zvidzidzo zvakaratidza kuti iyo AZD-9291 powder ine simba yakakura uye inhibitory zvinopesana ne mutant EGFR phosphorylation kumativi ose emakirini EGFRm neA T790M mutant cell NSCLC mitsara ine basa shoma rinopesana neEGFR mumasero emhando dzesango.
Osimertinib powder ichangobva kubudiswa neWorld Health Organization (WHO) seShoko reMarudzi Risiri Rezvinyorwa (INN) raAIDS raAIDS-9291, uye rinogona kugamuchirwa pamutemo munaNovember 2015. MuAmerica, American Medical Association yakagamuchira Osimertinib powder seUnited States Adopted Name (USAN).
AZD-9291 Powder (CAS 1421373-65-0)
Kuti uve mukuru (mukati 1kg) inogona kutumirwa muC3 kushanda kwemashure mushure mekubhadhara.
Caffeic Acid Phenethyl Ester Marketing
Kutenga sei Osimertinib powder; atenga AZD-9291 powder (CAS 1421373-65-0) kubva kuAASraw